Qatar: Hazavana hafahafa teo ambonin’i Doha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Jolay 2018 5:14 GMT
(Marihina fa tamin'ny 28 Janoary 2008 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
Niresaka momba ilay hazavana hafahafa teny amin'ny lanitr'i Doha ity ireo bilaogera tao Qatar .
Nanokatra ny boatin'i Pandora ny LifeIsBeautiful raha nanoratra tao amin'ny bilaogy Qatar Living :
Mino aho fa tsy izaho irery no nahita maso ireo hazavana hafahafa roa teo ambonin'i Doha omaly. Tany amin'ny manodidina ny 9.30 alina teo ho eo izany raha nijoro teo anoloan'ny tranoko tao Matar Kadeem (Seranam-piaramanidina tranainy) aho. Raha sendra nitraka aho dia nahita lelafo mazava teny amin'ny lanitra. Toy ny haben'ny baolina tennis irony ilay izy miaraka amin'ny lelafo mamirapiratra toy ny hazavana manjelanjelatra any amin'ny 2 maily ambony any. Nihisaka tsimoramora ilay izy ary raha ny elanelan'ny halavirana izay nisy azy, dia noheveriko fa baolina izany.
Gaga izahay rehetra ary olona maro hafa no tonga nanampy anay nitazana izany ihany koa. Samy nanontany izahay hoe mety ho inona ilay izy. Nihisaka avy any Atsimo nianavaratra ilay hazavana nandritra ny 10 minitra teo. Nizotra nahitsy ny lalany ary avy eo dia nanomboka nihodikodina teo amin'io toerana io. Rehefa afaka 3 na 4 minitra teo indray dia nanjavona tao anaty rahona izy. Tsy izany no izy. Rehefa afaka dimy minitra teo dia nisy hazavana toy izany ihany koa niseho avy eny amin'ny faravodilanitra atsimo ary nanaraka ny lalana nitovy tamin'izany. Nisy olona ve mpamaky ny QL nahatsikaritra izany? Mety ho inona ilay izy?
Namaly haingana ireo mpamaky, tamin'ny fanehoan-kevitra momba ny jiron'ny fiaramanidina mitsilopilopy sy ny fahitana OVNI. Ireto misy santionany tamin'ireo valinteny ireo:
Nanazava i Mariam-mar :
Mety ho karazana meteorita izany, toy izany no fahitako azy, na dia tsy mbola nahita izany aza ny masoko amin'izao taonako izao.
Nanampy i Femme hoe:
Mety ho jiron'ny fiaramanidina izany. Misokatra (mandritra ny fotoana voafetra) ho an'ny fifamoivoizan'ny fiaramanidina avy any andrefana ny ampahany amin'ny habakabaka amin'io alina io. Na mety ho iray amin'ny fiaramanidina avy any al udeid izany, manana karazana fiaramanidina maro izy ireo any.
Tsy faly tamin'ireo fanazavana ireo i Absolutejaguar ary naminavina lavidavitra kokoa:
Mahaliana ny fiheveran'ny olona rehetra fa jiron'ny fiaramanidina izany, kanefa matetika ny fanazavana tsotra indrindra no tena izy, tsy nisy olona ve nihevitra izany ho fiainana ‘extraterrestre’. Tsy ilay olona kely maitso no resahiko, kanefa miaina eto amin'ny vahindanitra goavam-be isika ao amin'izao tazamaso rehetra izao. Tena fireharehana tokoa raha mihevitra fa isika irery ihany no hany zavamanan'aina misy.
Niditra i Eby1975 ary nanolotra ny fitantarany ny zavatra hitany voalohany:
Na dia hitako aza izany tamin'ny nandehanako tany amin'ny lalan'ny seranam-piaramanidina. Tahaka ny baolina goavambe ilay izy tamiko raha vao tazako ary hoy aho hoe toa hafahafa izy izany. ..tsy lehibe toy izany ny volana ary rehefa nanakaiky kokoa ny seranam-piaramanidina aho mba hitazana azy tsara dia nihakely ilay izy ary hoy aho hoe.. mety ho ny rahona angamba no nanakona azy .. somary mampivarahontsana kely ny hoe OVNI.. tsy hoe nahita olona hafahafa manodidina teo aho akory !!!!!
Naverin'i Dweller amin'ny tena zava-misy isika ary nilaza izy fa Spiderman ilay izy, raha ny nihevitra kosa i Dreamz fa afomanga izany.
Nitohy ny adihevitra tao amin'ny QatarLiving nandritra izany rehetra izany.